Nigeria - BBC News Somali
Lacagtan malaayinka doolarka ah ayaa laga helay bangi ku yaalla Jersey.
"Nigeria maahan meel dhalinyarada u roon"
Baadariga ugu wayn madhabta Catholic-ga ee Nigeria, ayaa sheegay in madaxda Nigeria ay dalkaas ka dhigeen mid aan dhalinyarada uu roonayn, taas oo dhalinyarada ku khasabtay in ay si sharci darro ah ugu haajiraan dalalka Yurub.
Ma dhab baa Nigeria dhakhaatiir la'aani ma hayso
Wasiirka shaqada ee Nigeria ayaa sheegay in ay dalka joogaan dhakhaatiir badan oo aan la odhan karayn "aqoontii baa ka suudashay".
6 sababood oo ay guryo badan u dumaan
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa mar kale loo doortay madaxweynenimada Nigeria, sida ay muujinayso natijada kama dambaysta ah ee doorashadii Sabtidii dhacday.
Guddiga doorashooyinka ee dalka ayaa waxa uu ku dhawaaqay go'aankaasi saacada un ka hor inta aanay codbixintu bilaaban.
Sida ay sheegayso hay'adda MSF, 8000 oo qof ayaa waxa ay isaga carareen magaalada Rann ee gobolka Borno kaddib markii ay halkaasi la wareegeen maleeshiyaadka.
Khilaafka Milatariga Nigeria iyo hay’adda Amnesty International
Af hayeen u hadlay Amnesty International ayaa BBC-da u sheegay in aysan ku niyad jabi doonin hadalka ka soo baxay Milatariga.
Saraakiisha ku sugan dalka Nigeria waxay sheegayaan in ururka Booko Xaraam ay afduubteen 15 carruur ah kaddib markii ay weerar ku qaadeen tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla gobolka Diffa.
Dalka Nigeria Barasaab sheegay in muddo siddeed sano ah uusan wax mushaar ah qaadan
Rauf Aregbesola oo ah barasaabka gobolka Osun oo ku yalla Koonfurta Galbeed ee dalka Nigeria ayaa sheegay in siddeeddi sano ee uu maamulayay gobolkaasi uusan wax mushaar ah qaadan.
Rabshado diin salka ku haya ayaa ka dhacay suuq kuyaal gobolka Waqooyiga dalka Nigeria kuyaal ee Kaduna waxayna rabshadaasi galaafteen nolosha 55 qof sida uu sheegay madaxweynaha dalkaas Muhammadu Buhari.
Wararka ka imanaya dalka Nigeria ayaa shegaya in koox burcad badeed ah ay afduubteen shaqaala saarnaa markab.
23 Sebtembar 2018